Mareykanka iyo Qaramada Midoobay oo si adag u cambaareeyay go’aankii Itoobiya | Dayniile.com
Home Warkii Mareykanka iyo Qaramada Midoobay oo si adag u cambaareeyay go’aankii Itoobiya
Mareykanka iyo Qaramada Midoobay oo si adag u cambaareeyay go’aankii Itoobiya
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey Antonio Guterres ayaa sheegay inuu aad ula yaabay go’aanka dowladda Itoobiya ee ah inay dalkeeda ka ceyriso toddobo saraakiil sarsare ah oo ka tirsan Qaramada Midoobay.
Guterres oo cambaareeyay tallaabadan ayaa sheegay inay ku soo aadeyso laba maalmood kadib markii madaxa gargaarka Qaramada Midoobay Martin Griffith uu sheegay in boqolaal kun oo qof oo ku nool gobolka Waqooyi ee Tigray ay u badan tahay in macluuli ay soo foodsaarto.
Aqalka Cad iyo wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sidoo kale cambaareeyay tallaabada ay qaadday dowladda Itoobiya.
“Waxaan si adag u cambaareyneynaa go’aanka Itoobiya ay ku erisay toddoba sarkaal oo ka tirsan Qaramada Midoobay oo shaqadoodu ay muhiim u tahay gargaarka bani’aadamnimada. Maraykanku wuxuu ku baaqayaa in go’aankan la noqdo. Kama labalabeyn doonno inaan si adag uga jawaabno tallaabadan” ayuu yiri Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken.
Toddoba sarkaal, oo ay ku jiraan madaxa UNICEF iyo madaxa Xafiiska Qaramada Midoobey ee Isuduwidda Arrimaha Bani’aadamnimada ayaa la siiyay 72 saacadood inay dalka uga baxaan, kaddib markii xukuumadda Itoobiyada ay sheegtay inay “faragelin” ku sameeyeen arrimaha gudaha ee dalkeeda.
Previous articleCiidamo taabacsan Ahlu Sunna Waljamaaca oo la wareegay magaalada Guriceel.
Next articleAhlu Sunna Waljameeca oo goor dhawayd soo saartay Warbixinb ku aadan dagaalkii shalay Bohol ku dhex maray ciidamada Galmudug iyo kuwa Ahlu Sunna.
Avada has Intuitive visual front-end design and editing tools for you to create beautiful websites, fast. · A clean, modern, multi-purpose
Xaalada Degmada Guriceel oo Caawa Aloow Sahal ah
Dowladaha Somalia & Koonfur Afrika oo ka wada hadlay dhibaatada lagu...
Wafdi ka socda K/galbeed oo gaaray Magaalada Gaalkacyo si ay u...
Ciidamada Dowlada oo Go’doomiyay Duleedka Guriceel oo Gurmad uga imaan jiray...